Wararka Xanta Suuqa Kala Iisbiga Iyo Wargeysyada Yurub Ee Maanta: Haaland, Alaba, Salah, Mbappe, Upamecano, Sule, Lingard
HomeWararka CiyaarahaWararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee maanta: Haaland, Alaba, Salah, Mbappe, Upamecano, Sule, Lingard
February 6, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalada Kale, Horyaalka France, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Manchester City ayaa rumeysan in ku guuleysiga Horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan uu furo u yahay saxiixa weeraryahanka Borussia Dormund ee reer Norway Erling Braut Haaland, oo 20 jir ah (Star)
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa soo jeediyay in ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer France Paul Pogba oo 27 jir ah uu qarka u saaran yahay inuu heshiis cusub u saxiixo Old Trafford. (TheGuardian)
Weeraryahanka reer Masar Mohamed Salah, oo 28 jir ah, ayaa noqon kara ciyaaryahanka booska weyn kara haddii Liverpool ay dooneyso inay lasoo saxiixato weeraryahanka Paris St-Germain iyo xulka France Kylian Mbappe, 22, xagaagan. (Marca)
Reds ayaa dhameystirtay saxiixa 16 jirka qadka dhexe ee reer England Kaide Gordon oo aad looga qiimeeyo kooxda Derby County . (Dailymail)
Chelsea ayaa isku dayi doonta inay ku garaacdo Real Madrid saxiixa Bayern Munich iyo Daafaca Austria David Alaba, oo 28 jir ah, kaasi oo qarka u saaran inuu ka tago kooxda heysata horyaalka Jarmalka markii qandaraaskiisa uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan. (Theguardian)
Dhanka kale, Chelsea ayaa rajo ka leh saxiixa daafaca – RB Leipzig ahna Xiddiga reer France Dayot Upamecano, oo 22 jir ah, iyo xiddiga Bayern Munich Jarmalka Jarmalka Niklas Sule, oo 25 jir ah. (Goal)
West Ham ayaan ku deg degi doonin inay go’aan ka gaarto haddii ay isku dayayaan inay amaah 28 jirka khadka dhexe ee reer England Jesse Lingard ee Manchester United in ay ka dhigaan mid joogta ah. (Standard)
Leicester City ayaa wadahadalo kula jirta ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Belgium Youri Tielemans, oo 23 jir ah, heshiis cusub oo uu isbuucii ku qaadanayo 100,000 oo ginni. (Dailymail)
Xiddiga qadka dhexe ee reer Norway Martin Odegaard, oo 22 jir ah, ayay u badan tahay inuu si joogto ah ugu dhaqaaqo Arsenal haddii Zinedine Zidane uu sii ahaado macalinka kooxda Real Madrid . (Eurosport)
Tababaraha Real Zidane ayaa sheegay inuu ka codsaday Odegaard inuu kooxda sii joogo qeybta labaad ee xilli ciyaareedka. (Metro)
Manchester United ayaan hada dooneyn inay lasoo saxiixato daafac dhexe oo cusub sababtoo ah qaab ciyaareedka daafaca reer England Harry Maguire. (Manchester Evening News)
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa isha ku haya inuu lasoo saxiixdo 21 jirka daafaca midig ee reer England Max Aarons oo ka socda Norwich City marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga. (Express)
Codsiga weeraryahanka reer Wales Gareth Bale, oo 31 jir ah, ayaa su’aalo laga weydiinayaa Tottenham , dulqaadkuna wuu ku yaraaday heerka amaahda Real Madrid . (Dailymail)
Chelsea ayaa xiiseyneysa inay dib ula soo saxiixato weeraryahanka reer Belgium Eden Hazard, oo 30 jir ah, xagaagan Real Madrid . (Defensa Central – Isbaanish)